Muxuu R/Wasaare ROOBLE kala hadlay taliyeyaashii uu maanta la shiray? + Sawirro | Dalkaan.com
Home Warkii Muxuu R/Wasaare ROOBLE kala hadlay taliyeyaashii uu maanta la shiray? + Sawirro
Muxuu R/Wasaare ROOBLE kala hadlay taliyeyaashii uu maanta la shiray? + Sawirro
Muqdisho (dalkaan) – Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulan looga hadlayay u diyaar garowga doorashada Xildhibaannada Golaha Shacabka la qaatay Guddiga amniga doorashooyinka, kuwaas oo isugu jira Taliyeyaasha Booliiska heer Fedaraal iyo heer dowlad goboleed, Booliska AMISOM iyo Booliska UN-ka oo ka taageera dhinacyada farsamada.
Previous articleAndros Townsend oo ka hadlay Sababta uu u Sameeyay dabaaldegga Cristiano Ronaldo
Next articleOle Gunnar Solskjaer oo ka jawaabay keyd uu fadhiisiyay Cristiano Ronaldo kulankii Everton
Xulka qaranka France ayaa ku guuleystay koobka UEFA Nations League iyagoo 2-1 ku garaacay Spain oo ay iskugu soo baxeen ciyaartii ugu dambaysay...